Seddax qof oo ku dhimatay weerar ka dhacay deegaanka Gandershe ee gobolka Sh/hoose – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Seddax qof oo ku dhimatay weerar ka dhacay deegaanka Gandershe ee gobolka Sh/hoose
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Gandershe oo qiyaastii 15km u jirta magaalada Marka ee xarunta gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay halkaasi ku dileen dad xoolo dhaqato ah oo ku sugnaa goob lagu shaahayay oo ku taalla duuleedka deegaankaas.
Kooxo aan la aqoon waxa ay yihiin ayaa la sheegayaa inay rasaas ku fureen goob ay dadkaasi xoolo dhaqatada ah ku sugnaayeen, waxaana rasaastaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Illaa 3 qof oo mid ka mid ah ay ahayd haweeney ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen rasaastaasi, iyadoona tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacantay, sida uu inoo xaqiijiyey Maxamed Jeylaani oo ka mid ah dadka deegaanka.
Weerarkaan oo ahaa kii ugu horeeyay oo ka dhaca deegaanka Gandershe ee gobolka Sh/hoose ayaa illaa iyo haatan la ogeyn waxa uu salka ku haayo, balse loo maleeynayo inay salka ku hayso aanooyin qabiil.
Dhinaca kale, kooxihii weerarkaasi ka dambeeyay ayaa la sheegayaa inay goobta ka baxsadeen, waxaana maanta deegaanka Gandershe si weyn looga hadal haayaa dhacdadaan argagaxa leh oo halkaasi ka dhacday.